रुकुम पश्चिमको घटना, के जातीय भेदभावको उदाहरण हो ? – Ravi Dhami
May 27, 2020 May 26, 2020 by ravidhami
जेठ १२, २०७७ कैलाली- रुकुम पश्चिमको एक दुखद घटनाले मनमा केहि प्रश्न उब्जे तेसैले केहि बेक्तिगत विचार लेख्दै छु।
१) जातीय हेपाई अझै देशमा छ ?
उतर: हो, छ । यहाँ भित्री रुपमा बाहुन-बाहुन बीचमा ठुलो सानो भन्ने छ । तेसै गरि छेत्रीमा र दलित भित्र पनि म ठुलो, त सानो भन्ने छ । तर सबैभन्दा बढी दलितहरु हेपाइमा परेका थिए अरुबाट, अझै पनि छ्न ।
हामी कता गइरहेका छौ, १० बर्षे जनयुद्ध को उपलाब्धिता के ?
२) नेपालको संविधानले हक दियो तर अझै विभेद किन ?
उतर: नेपालको संविधान भाग-३ ले सबैलाई सम्मानपुर्बक बाच्न पाउने हक दिएको छ । कानुनको हिसाबले सबै समान छ्न । समान कानुन सबैलाई लागने छ। राज्यले सबै नागरिकलाई समान व्यबहार गर्ने छ ।
तर काठमाडौँमा बसेर संविधान लेख्नु जस्तो सझिलो छैन, पिछडिएका ठाँउका ब्यक्तिहरुको सोचलाई अन्त गर्न। काठमाडौंका ३ तारे-५ तारे होटेलमा, अनि ठुला resort मा foreign funded program राखेर २/४ जना दलित नेताहरुलाई बोलाएर भाषण दिन लगाएर दलितमाथि को हेपाई अन्त्य हुदैन । विभेद कानुनले समाप्त हुँदैन एक आर्का लाई मान्छे-मान्छे को जस्तो व्यबहार गर्नुस् आफै समाप्त हुनेछ । आर्थिक हिसाबले सबै वर्गलाई सक्षम र शिक्षित पर्नु पर्छ अनि मात्र अन्त्य हुनेछ ।
समय लाग्छ, तर पकै पनि यो विभेद समाप्त हुन्छ पुर्ण रूपमा ।
३) रुकुमको घटना के जातीय भेदभावको उदाहरण हो ?
उतर: हो, तेस्मा दुई मत छैन । हाम्रा नेताहरुले नारा चाहि राम्रो दिन्छन, जातिय भेदभाव, लैङ्गिक भेदभाव, सामन्तीबाद,सामन्ती सोच के-के हो-हो तेस्को अन्त्य गरौ भनेर। युगान्तकारी परिबर्तन गरेउ भन्दै चिल्ला भाषण ठोक्दै हिड्छन। संबिधानमा लेखेको भरमै मानब मानसिकतामा परिवर्तन आउदैन।
यो घटनाले सबै नेपालीको मानसिकता परिबर्तन होला-नहोला तर लाखौ-लाखले सहि यो कुरा हो गलत यो कुरा हो छुट्याउने छन्। समाजमा रहेको एस्तो विभेदकारी मानसिकतामा २ – ४ % भएनी परिबर्तन आउने छ।
तर के मेरो सोचमा परिबर्तन आयो ? के मेरो परिवारको सोच मा परिबर्तन आयो ?
अब यो प्रश्न पहिला सोयम हामीले आफुलाई सोध्नु पर्छ । समाज भनेको हामि हो, हाम्रो घर परिवार नै हो। अब अरु लाई दोष दिएर उम्किनु हुदैन।
म र मेरो परिवारलाई म परिबर्तन गराउने छु, अनि तपाइको परिवारलाई नि ?
सच्याउ, सुधार गरौ हामि पनि नेताको जस्तो ठुला-ठुला युग्कारी गफ नदिऔ। आफु र आफ्नो परिवारको जिम्मेवारी लिउ, धेरै केहि गर्नु नै पर्दैन।
४) के येस्मा केटी पक्ष को मात्र गल्ती छ ?
उतर: छैन । केटा पक्ष लाई निर्दोष भनेर जातीय card मात्रै खेल्नु गलत हो । चाहे आरु जातको भए पनि राति को समयमा २० / २२ बर्षे केटाहरुको हुल आएर भगाउन खोज्दा कसैले टिका-टालो गरेर पठाउलान जस्तो लाग्दैन।
कसैको घरमा १८-१९ जना केटाहरु लगेर केटि भगाउन जानु आफै मा गलत हो। इज्जत सबै लाई प्यारो हुन्छ फेरी केटिको कुरामा परिवार संबेदनशील हुन्छ । एक पल्ट आफु लाइ राखेर हेर्नुस त कोहि तपाइको घरमा छोरि बहिनि भगाउन १८-१९ जना साथीहरु लिएर आउदा कसरी react गर्नु हुन्थ्यो ? १७ बर्ष उमेरको केटी भागाउदा, बालबिवाह र धम्काइ थर्काइ बिवाहा गरेको लगाएत बलत्कार देखी अपहरण सम्म को मुद्दा लगाउन सकिन्छ।
५) ३ जना को ज्यान गएको छ तेस्को न्याय के ?
उतर: आबेशमा आएको होलान , छोरी को माया होला एस्ता बेतुक कुरा गरेर, यो अपराध लाई दायाँ बायाँ मोड्नु हुँदैन । हात भाचिन्थ्यो, चोट पटक लाग्थ्यो कुरा आर्को हुन्थ्यो होला तर यहा ३ जानको ज्यान गएको छ । अब प्रहरीले निस्पक्ष जाँच गरोस्। केहि दिनमा पुर्ण घटना के हो, यथार्थ कुरा के हो, हामी बीच आउने नै छ । अनि गल्ती जो सुकैले गरेको होस्, उस्लाई नेपालको कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ। हत्या जघन्य अपराध हो । यदि यो हत्या नै हो भने हत्यारा जो सुकै होस्, कानुन अनुसार सजाय पाउनु पर्छ ।
प्रेम गर्ने अधिकार सबैलाई छ । त्योभन्दा पनि स-सम्मान बचन पाउनु पर्छ र बाचन दिनु पर्छ।
Find me on facebook: Ravi Dhami
Categories Blog Tags रुकुम पश्चिमको घटना Post navigation